Holland America's Rotterdam i $4.1 miriyoni inoyangarara art gallery
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Holland America's Rotterdam i $4.1 miriyoni inoyangarara art gallery
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Holland America's Rotterdam i $4.1 miriyoni inoyangarara art gallery.
Holland America Line's Rotterdam imuseum pagungwa ine 2,645 zvidimbu zvemabasa akasiyana-siyana kubva pamutengo kubva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora mazana matanhatu nemakumi matanhatu emadhora anotenderera madhishi, makamuri eruzhinji uye mastateroom.
Zvinopfuura 2,500 zvidimbu kubva kune gumi nemaviri epasi rose maartist anovandudza dhizaini yemukati yeRotterdam.
Muunganidzwa wehunyanzvi weRotterdam unokosha kupfuura madhora 4.1 miriyoni uye wakarongedzwa neOslo-based YSA Design uye London-based ArtLink.
Nyika dzinopfuura makumi matatu nenomwe dzinomiririrwa nevanyori veRotterdam, nenhamba huru yevatsigiri vanobva kuNetherlands, United States neUnited Kingdom.
Holland America Line ngarava dzagara dzichionekwa semakamuri emifananidzo anoyangarara nekuda kwekuunganidza kwavo kwakakura kwezvimedu zvemumuseum-mhando. Rini reRotterdam seti tinofamba kekutanga Gumiguru 20, 2021, vashanyi vari parwendo rune mubairo nemamwe emhando dzinonyanya kufunga, dzinoshamisa uye dzakashinga muboka rengarava - kusanganisira mabasa enhoroondo uye memorabilia kubva kungarava dzekare dzinodiwa.
reRotterdam's art collection inokosha inodarika madhora 4.1 miriyoni uye yakarongedzwa neOslo-based YSA Design uye London-based ArtLink, iyo yakabatana neanozivikanwa dhizaini dhizaini Tihany Design. Mhedzisiro iyi museum pagungwa ine 2,645 zvidimbu zvemabasa akasiyana-siyana kubva pakukosha kubva pamadhora mazana mashanu kusvika kumadhora mazana matanhatu nemakumi maviri nemakumi maviri ezviuru anotenderera madhishi, makamuri eruzhinji uye mastaterooms.
Kupfuura 37 nyika dzinomiririrwa ne reRotterdam's artists, nenhamba huru yevatsigiri vanobva kuNetherlands, United States neUnited Kingdom. Vanyori vanobvawo kuArgentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Republic of Korea, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey neUkraine.
Zvizhinji zvezvimedu zvinotarisa pavaraidzo, kuratidza madingindira emimhanzi, kutamba uye kufamba, kuruka rondedzero yengarava ye "ruzha rutsva rwekufamba" muhunyanzvi. Mabasa ari munhau dzakawanda, kusanganisira kutora mifananidzo, kupenda, midhiya yakasanganiswa, mifananidzo, madhindindi uye zvivezwa.